Uppdaterades 14 maj 2021 14:10
Xayiraada ayaa saaran safarada aan muhiimka aheyn ee Iswiidhan loogaga imanaayo wadamada ka baxsan Midowga Yurub. Waxay mamnuucidu shaqeynaysaa ilaa 31 Maayo 2021.
Su'aalaha iyo jawaabaha Wasaaradda Caddaaladda ee ku saabsan mamnuucida soo gelitaanka ee Midowga Yurub iyo Iswidhan (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Waxa hadda si ku meel gaadh ah u jirta soo galitaanka Iswiidhan oo laga mamnuucay ka imaanshaha Boqortooyada Ingiriiska, Denmark iyo Norway ee dadka ajaanibka ah.
Laga bilaabo 31 Maarso 2021, ayaa waxa Denmark iyo Noorway khuseeya xeerar la mid ah kuwa dalalka kale ee EES iyadoo Boqortooyada Ingiriiska ay khuseeyaan xeerar la mid ah kuwa waddamada kale ee ka baxsan EES. Qofka Iswiidhan uga soo safraaya waddamada kale ee ka tirsan EES-ta ayaa loo oggolaanayaa inuu soo galo haddii uu tusi karo tijaabada covid-19 oo muujineysa inaan la qabin taas oo 48 saacadood jir ah. Waxa boqortooyada Ingiriiska markaas khuseeya xayiraadda guud ee saaran soo galitaanka waddamada ka baxsan Midowga Yurub/EES.
Waxa wadamo badan ka jira noocyo cusub oo fayruska covid-19 keena. Sidaas darteed ayay Folkhälsomyndigheten ugu soo jeedinaysaa in dhamaan dadka u soo safray Iswiidhan, iyadoo aan loo eegeynin jinsiyadooda, ay markay soo galaan tijaabo iska qaadaan oo ay toddobada maalmood xiriirada dadka ka fogaadaan. Shan maalmood ka dib marka wadanka dibadiisa laga yimaado waa inay musaafiriintu tijaabo labaad iska qaadaan. Waxay taasi khuseysaa iyadoon aan loo eegin haddi laga mid yahay dadka ay saaran tahay shuruudaha ah in la soo bandhigto tijaabo inaan covid-19 la qabin ka hor intaan la soo gelin iyo haddii kaleba.
guriga joogto ugu yaraan toddoba maalmood.
iska ilaaliso inaad la xiriiro dadka kale ilaa iyo inta la kari karro.
iskugu tijaabi sida ugu dhakhsaha badan ee ka dib markaad Iswiidhan timaado iyadoo aad tijaabo xigta iska qaadayso shan maalmood ka dib.
Sidoo kale dadka qoyska intooda kale waa inay guriga iska joogaan ilaa inta natiijada tijaabada la sugaayo.
Talobixinta Folkhälsomyndigheten ee loo soo jeedinaayo qofka Iswiidhan wadanka dibadiisa uga soo safraaya (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Folkhälsomyndigheten iyo waxyaabaga ku saabsan nooca cusub ee fayruska (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
1177 iyo waxyaalaha tijaabo qaadista ku saabsan (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Goobaha makhaayadaha ee qeybta ka ah xarumaha ganacsiga, ayaa kaliya miiskiiba hal qof uun loo ogol yahay.
Goobaha adeega/mukhaayadaha waa in ugu danbeyn saacada 20.30 la xidhaa.